1 Interrogation (2020) | MM Movie Store
နှဈ(၄၀)လုံးလုံး လူဆိုးတှကေိုစဈဆေးမေးမွနျးပွီးထောငျထဲပို့နတေဲ့ စုံထောကျဒနျနီရယျ…ကောငျးမှနျတဲ့ကမ်ဘာဖွဈ လာစဖေို့ မြှျောလငျ့ရငျး တာဝနျကိုကပြှေနျစှာထမျးရှကျနတေဲ့စုံထောကျဒနျနီရယျ…သူ့လိုမြိုးပဲ အလုပျကိုကပြှေနျစှာထမျး ဆောငျတဲ့ ခရိုငျရှနေ့ဝေေါ့ကာတို့ကို ဇာတျအိမျတညျပွီးရိုကျထားတဲ့ကားလေးပါ။
သူတို့နှဈယောကျက အမှုတဈခုကိုဖွရှေငျးပွီးတိုငျး နောကျတဈမှုကထပျထပျရောကျလာတယျ။ သူတို့ကိုငျတှယျနရေတဲ့အမှုတှကေလညျးအမြိုးစုံ သလို တရားခံတှကေလညျးအမြိုးစုံရယျ…နဈနာသူတှကေလညျးပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ရယျပေါ့….….
ဒီကားလေးကိုကွညျ့ပွီး သိလိုကျရတာက မကောငျးတဲ့လူတှကေအသကျအရှယျမရှေးရှိကွသလို အခွအေနပေတျဝနျးကငျြတဈခုကွောငျ့ လူဆိုးဖွဈ လာကွတာမြိုးလညျးရှိကွတယျဆိုတာပါပဲ… ခြုပျရရငျတော့ ဒီကားလေးကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကွညျ့လို့ကောငျးရဲ့လားကို တော့ ကိုယျတိုငျကွညျ့ရှုပွီးသုံးသပျလိုကျကွပါလို့…………
နှစ်(၄၀)လုံးလုံး လူဆိုးတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးထောင်ထဲပို့နေတဲ့ စုံထောက်ဒန်နီရယ်…ကောင်းမွန်တဲ့ကမ္ဘာဖြစ် လာစေဖို့ မျှော်လင့်ရင်း တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းရွက်နေတဲ့စုံထောက်ဒန်နီရယ်…သူ့လိုမျိုးပဲ အလုပ်ကိုကျေပွန်စွာထမ်း ဆောင်တဲ့ ခရိုင်ရှေ့နေဝေါ့ကာတို့ကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါ။
သူတို့နှစ်ယောက်က အမှုတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပြီးတိုင်း နောက်တစ်မှုကထပ်ထပ်ရောက်လာတယ်။ သူတို့ကိုင်တွယ်နေရတဲ့အမှုတွေကလည်းအမျိုးစုံ သလို တရားခံတွေကလည်းအမျိုးစုံရယ်…နစ်နာသူတွေကလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရယ်ပေါ့….….
ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီး သိလိုက်ရတာက မကောင်းတဲ့လူတွေကအသက်အရွယ်မရွေးရှိကြသလို အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကြောင့် လူဆိုးဖြစ် လာကြတာမျိုးလည်းရှိကြတယ်ဆိုတာပါပဲ… ချုပ်ရရင်တော့ ဒီကားလေးကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လားကို တော့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုပြီးသုံးသပ်လိုက်ကြပါလို့…………
Gun Woman – Link 1